မှတ်ချက်များ - OCD ကဲ့သို့မလိုမုန်းထားသည့်အပြုအမူများနှင့်လောင်းကစားစွဲလမ်းမှုအကြားသိသာထင်ရှားသည့်ခွဲခြားမှုကိုပြုလုပ်သည်။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုငြင်းပယ်သူများကမကြာခဏဆိုသလိုညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများသည်စွဲလမ်းခြင်းထက်မဟုတ်ဘဲအနိုင်ကျင့်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုပြောကြသည်။ ဒီအတုအယောင်ပြောဆိုချက်ကိုငြင်းဆိုသည်
Neuropsychopharmacology ။ ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ၊ 35(3): 591-604 ။
2009 နိုဝင်ဘာလ 25 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1038 / npp.2009.185
စာရေးသူသတင်းအချက်အလက်များ ► အပိုဒ်မှတ်စု ► မူပိုင်ခွင့်နှင့်လိုင်စင်သတင်းအချက်အလက်များ ►
Fronto-striatal အာရုံကြောပတ် ၀ န်းကျင်များကို cortical control မအောင်မြင်လျှင် impulsive and compulsive functions များကိုအခြေခံသည်။ ဤဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပြုအမူများကိုအာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ရှုထောင့်မှလေ့လာပြီး၎င်းအပြုအမူများနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များသည်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးခြင်း - compulsive disorder (OCD)၊ trichotillomania နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား။ ကျနော်တို့ orbitofrontal cortex (OFC) မှ medial striatum (caudate နျူကလိယ) မှအဆိုပြုထား, အပြိုင်, function ကိုအသားအရောင်ခွဲခြား, cortico-striatal အာရုံကြောစီမံကိန်းများ, ဘာသာပြန်နှင့်လူ့ endophenotypes သုတေသနနှင့်လက်တွေ့ကုသမှုစမ်းသပ်မှုများပါဝင်သောအချက်အလက်များ၏ကျယ်ပြန့ကနေတွေ့ရှိချက်တင်ပြ compulsive လှုပ်ရှားမှုမောင်းနှင့် anterior cingulate / ventromedial prefrontal cortex ကနေ ventral striatum (nucleus accumbens shell ကို) အထိ, ထကြွလွယ်သောလှုပ်ရှားမှုမောင်းနှင်ရန်အဆိုပြုနှင့်သူတို့အကြားအပြန်အလှန်။ W
ဆိုလိုသည်မှာ impulsivity နှင့် compulsivity တို့သည် multidimensional ဖြစ်ဟန်တူသည်။ ထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ် compulsive အပြုအမူကိုထပ်အဖြစ်ကောင်းစွာအာရုံကြောအလွှာထပ်နေဖြင့်ကမကထပြုခဲ့ရသည်။ တီရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းသည်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာခွဲခြားဖော်ပြသည့်ပုံမှန်မဟုတ်သော ventral ဆုလာဘ် circuit ကိုပါ ၀ င်သည်။ OCD သည် motor impulsivity နှင့် compulsivity ကိုပြသည်၊ OFC-caudate circuit များ၏အနှောင့်အယှက်များအပြင်အခြားသော frontal, cingulate နှင့် parietal connection များမှဖြစ်နိုင်သည်။။ Serotonin နှင့် dopamine သည် impulsive and compulsive response ၏ရှုထောင့်များကိုပြောင်းလဲရန်ထို circuit များအား ဖြတ်၍ ဆက်သွယ်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံနည်းကျအလုပ်များကိုအာရုံခံ - တိကျတဲ့အာရုံကြောဓာတုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဦး နှောက်စနစ်များကိုအာရုံကြောချဲ့ထွင်နိုင်သည့်နည်းစနစ်များဟာဒီနယ်ပယ်မှာအနာဂတ်သုတေသနအတွက်အလားအလာရှိတယ်။
ထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ် compulsive အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူလုပ်ရပ်များတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သပ္ပါယ်လူ့အပြုအမူကိုအထူးအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါသော်လည်း, ထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ် compulsive အပြုအမူ၏စည်းစနစ်တကျစည်းမျဉ်းဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် function ကိုရှိနိုင်ပါသည်။ Impulsivity ကို 'အတွင်းစိတ်နှင့်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုများသို့လျင်မြန်။ ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသောတုံ့ပြန်မှုများဆီသို့ ဦး တည်သောကြိုတင်ခန့်မှန်းမှု' ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ချိန်ဘာလိန်နှင့် Sahakian, 2007; Potenza, 2007b) ။ ဆနျ့ကငျြ, compulsive (functional ချို့ယွင်းမှဦးဆောင်ရိပ်မိအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုတားဆီးဖို့လေ့သို့မဟုတ်ကျပုံစံထုံးစံ၌ unpleasantly ထပ်တလဲလဲပြုမူလုပ်ဆောင်တဲ့သဘောထားကိုကိုယ်စားပြုတယ်WHO က, 1992; ဟော်လန်နှင့် Cohen ကို, 1996; ချိန်ဘာလိန် et al, 2006b) ။ ဤတည်ဆောက်မှုနှစ်ခုသည်ဆန့်ကျင်ဖက်သို့မဟုတ်တစ်နည်းအားဖြင့်ဆင်တူသည်ဟုရှုမြင်နိုင်သည်၊အို (Stein နှင့်ဟော်လန်, 1995) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအလားအလာမော်တာသို့မဟုတ်သိမြင်တုံ့ပြန်မှုများ၏အာရုံစူးစိုက်မှု, အမြင်နှင့်ညှိနှိုင်းအပါအဝင်အာရုံကြောဖြစ်စဉ်များ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအတွင်းအပြောင်းအလဲတချို့ပါဝငျသညျ။
Neuroanatomical မော်ဒယ်များသည်သီးခြားဖြစ်သော်လည်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သော 'compulsive' နှင့် 'impulsive' cortico-striatal circuits များ၊ neurotransmitter များကကွဲပြားစွာ modulated (ရှိနေခြင်း) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။Robbins, 2007; ဘရူနှင့် Potenza, 2008). compulsive circuit တွင် striatal component (caudate nucleus) သည် compulsive အပြုအမူများကိုမောင်းနှင်နိုင်ပြီး prefrontal component တစ်ခု (orbitofrontal cortex, OFC) သည်၎င်းတို့အပေါ်တားစီးထိန်းချုပ်မှုကိုပြုနိုင်သည်. အလားတူစွာထကြွလွယ်သော circuit တွင် striatal component (ventral striatum / nucleus accumbens shell) သည်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများကိုမောင်းနှင်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်ဤပုံစံတွင်အနည်းဆုံး striatal အာရုံကြောပတ်လမ်း (၂) ခု (တစ်ခု compulsive နှင့် impulsive) တစ်ခုရှိပြီးထိုအပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်သောသက်ဆိုင်ရာ prefrontal circuit များနှစ်ခုရှိသည်။ အဆိုပါ prefrontal အစိတ်အပိုင်းများအတွက် striatal အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သော (ယူဆရ hypoactivity) အတွင်း Hyperactivity ထို့ကြောင့်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသော Sub-အစိတ်အပိုင်းပေါ်မူတည်။ ထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ် compulsive အပြုအမူတွေကိုကွပ်မျက်များအတွက်တိုးမြှင့်အလိုအလျောက်သဘောထားကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ cortico-striatal circuits အတွင်းရှိဖြစ်နိုင်သောအခြားပုံမှန်မဟုတ်သောအရာများ (ဥပမာအားဖြင့်ဆုလာဘ်များမှ striatal activation နှင့်ဆက်စပ်သော) သည်လည်းဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်နေစဉ်ထင်ထင်ရှားရှားထကြွလွယ်သောအပြုအမူများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားရောဂါဗေဒသည်ဤတိကျတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသို့ထိပုတ်ပါသောသိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၏တာဝန်များကိုအသုံးပြု။ နှင့်ဤနဗ်ကြောစနစ်များအတွင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာကြောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအားဖြင့်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဤအလုပ်လုပ်သောစနစ်များအကြားထပ်တူကျအောင်လုပ်ရန်၊ ထို impulsive circuit တွင်ပြaနာတစ်ခုအဖြစ်စတင်သောအရာသည် compulsive circuit အတွင်းပြversနာတစ်ခုအဖြစ်အဆုံးသတ်သွားနိုင်ပြီးအပြန်အလှန်အားဖြင့်အဆိုပြုထားသော impulsive-compulsive diathesis model သို့အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ Hollande နဲ့ Wong (1995) (ဘရူနှင့် Potenza, 2008).
မူးယစ်ဆေးဆုနှင့်စွဲအတွက် Adinoff ခ Neurobiologic ဖြစ်စဉ်များ။ Harv ဗြာစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004;12: 305-320 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Aron AR, Dowson JH, Sahakian BJ, Robbins TW ။ Methylphenidate သည်အာရုံစူးစိုက်မှု - လိုငွေပြမှု / hyperactivity disorder နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်တုန့်ပြန်မှုတားစီးမှုကိုတိုးတက်စေသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;54: 1465-1468 ။ [PubMed]
Aron AR, Poldrack RA ။ တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ: အာရုံစူးစိုက်မှု - လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါအတွက်မျိုးဗီဇသုတေသနများအတွက်ဆက်စပ်မှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;57: 1285-1292 ။ [PubMed]
Baxter LR၊ Jr. Phelps ME၊ Mazziotta JC၊ Guze BH, Schwartz JM, Selin CE ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက်ဒေသခံ ဦး နှောက်ဂလူးကို့စဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းထားများ။ unipolar စိတ်ကျရောဂါနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်နှုန်းထားများနှင့်အတူတစ် ဦး ကနှိုင်းယှဉ်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1987;44: 211-218 ။ [PubMed]
Bechara အေအန္တရာယ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်း: စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်စွဲလမ်း။ J ကို Gamble လုံး။ 2003;19: 23-51 ။ [PubMed]
Bechara A၊ Damasio AR, Damasio H, Anderson SW ။ လူ့ prefrontal cortex ကိုပျက်စီးစေခြင်းအားဖြင့်အနာဂတ်အကျိုးဆက်များအပေါ်အာရုံမခံစားနိုင်မှု။ သိမှတ်ခံစားမှု။ 1994;50: 7-15 ။ [PubMed]
Belin: D, Mar AC၊ Dalley JW, Robbins TW, Everitt BJ ။ မြင့်မားသော impulsivity သည် compulsive cocaine -aking ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သိပ္ပံ။ 2008;320: 1352-1355 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဘာလင် HA, Hamilton က H ကို, Hollander အီး ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက် Neurocognition နှင့်စိတ်ထား။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း၊ ကွန်ဖရင့်ပိုစတာ - ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ၊ ၂၀၀၈
Orbitofrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာများတွင်ဘာလင် HA, Rolls ET, Kischka U. Impulse, အချိန်အမြင်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အားဖြည့် sensitivity ကို။ ဦးနှောက်။ 2004;127 (Pt 5: 1108-1126 ။ [PubMed]
Blanco C, Potenza MN, Kim SW, Ibanez A, Zaninelli R, Saiz-Ruiz J, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ထကြွလွယ်သောနှင့် compulsivity ၏ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2009;167: 161-168 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bloch MH, Landeros-Weisenberger A, Kelmendi B, Coric V, Bracken MB, Leckman JF ။ တစ် ဦး ကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်: ကုသမှုဆန့်ကျင်ဘက် obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်အတူ antipsychotic တိုးပွား။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;11: 622-632 ။ [PubMed]
Bohlhalter S, Goldfine A, Matteson S, Garraux G, Hanakawa T, Kansaku K ။ Tourette syndrome ရောဂါအတွက် tic မျိုးဆက်၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှု: အဖြစ်အပျက် -related အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI လေ့လာမှု။ ဦးနှောက်။ 2006;129 (Pt 8: 2029-2037 ။ [PubMed]
Boulougouris V ကို, Dalley JW, Robbins TW ။ ကြွက်များတွင် serial Spatial ပြောင်းပြန်သင်ယူမှုအပေါ် orbitofrontal, infralimbic နှင့်ပဏာမ cortical ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2007;179: 219-228 ။ [PubMed]
Boulougouris V၊ Glennon JC၊ Robbins TW ။ ကြွက်များတွင်အမှတ်စဉ် Spatial ပြောင်းပြန်သင်ယူမှုအပေါ်ရွေးချယ် 5-HT2A နှင့် 5-HT2C အဲဒီ receptor ရန်၏ Dissociable သက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2008;33: 2007-2019 ။ [PubMed]
Brewer JA, Grant JE, Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှု။ စွဲစွဲလမ်းမှုကင်းဝေးသည်။ 2008;7: 1-14 ။
ဘရူဂျာ Potenza MN ။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်ခြင်း၏ neurobiology နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ: မူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းမှဆက်ဆံရေး။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Pharmacol ။ 2008;75: 63-75 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, ဘလက်ဝဲလ်အေဒီ, Fineberg NA, Robbins TW, Sahakian BJ ။ obsessive compulsive ရောဂါ၏ neuropsychology: ကိုယ်စားလှယ်လောင်း endophenotypic အမှတ်အသားများအဖြစ်သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတားစီးအတွက်ဆုံးရှုံးမှု၏အရေးပါမှုကို။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2005;29: 399-419 ။ [PubMed]
Chamberlain SR, Blackwell အေဒီ, Fineberg NA, Robbins TW, Sahakian BJ ။ obsessive-compulsive ရောဂါနှင့် trichotillomania အတွက်မဟာဗျူဟာအကောင်အထည်ဖော်မှု။ Psychol Med ။ 2006a;36: 91-97 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Chamberlain SR, Del Campo N ကို, Dowson J ကို, Muller ဦး, Clark က L ကို, Robbins TW ။ Atomoxetine သည်လူကြီးများအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု / hyperactivity disorder နှင့်တုန့်ပြန်မှုတားဆီးမှုကိုတိုးတက်စေခဲ့သည် Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007a;62: 977-984 ။ [PubMed]
Chamberlain SR, Fineberg NA, Blackwell အေဒီ၊ Clark L၊ Robbins TW, Sahakian BJ ။ obsessive-compulsive ရောဂါနှင့် trichotillomania တစ် ဦး က neuropsychological နှိုင်းယှဉ်။ Neuropsychologia ။ 2007b;45: 654-662 ။ [PubMed]
Chamberlain SR, Fineberg NA, Blackwell အေဒီ၊ Robbins TW, Sahakian BJ မော်တာတားစီးနှင့် obsessive-compulsive ရောဂါနှင့် trichotillomania အတွက်သိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006b;163: 1282-1284 ။ [PubMed]
Chamberlain SR, Fineberg NA, Menzies LA, Blackwell အေဒီ၊ Bullmore ET, Robbins TW, et al ။ စိတ်ဖိစီးမှုမရှိသောရောဂါရှိသည့်လူနာများ၏ဆွေမျိုးသားချင်းများထံမှသိမြင်မှုဆိုင်ရာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုနှင့်မော်တာတားစီးမှုချို့ယွင်းချက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007c;164: 335-338 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Chamberlain SR, စွဲလမ်း - compulsive ရောဂါ၏ Menzies L. Endophenotypes: ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်, သက်သေအထောက်အထားနှင့်အနာဂတ်အလားအလာ။ ကျွမ်းကျင်သူဗြာ Neurother ။ 2009;9: 1133-1146 ။ [PubMed]
Chamberlain SR, Menzies L, Hampshire A, Suckling J, Fineberg NA, del Campo N, et al ။ obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်၎င်းတို့၏ထိခိုက်ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်အတူ Orbitofrontal ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ သိပ္ပံ။ 2008a;321: 421-422 ။ [PubMed]
Chamberlain SR, Menzies L, Sahakian BJ, Fineberg NA ။ trichotillomania အပေါ်ကုလားကာရုပ်သိမ်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007d;164: 568-574 ။ [PubMed]
Chamberlain SR, Menzies LA, Fineberg NA, Del Campo N, Suckling J, Craig K သည်။ trichotillomania အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စမူမမှန်: morphometric သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008b;193: 216-221 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Chamberlain SR, Muller U, Blackwell အေဒီ၊ Clark L၊ Robbins TW, Sahakian BJ ။ တုန့်ပြန်တားစီးနှင့်လူသားများတွင်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာသင်ယူမှု၏ Neurochemical မော်ဂျူ။ သိပ္ပံ။ 2006c;311: 861-863 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Chamberlain SR, Muller ဦး, Deakin JB, Corlett PR, Dowson J, Cardinal R ကို။ ကျန်းမာသောယောက်ျားစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၌ buspirone ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိခြင်း။ J ကို Psychopharmacol ။ 2006d;21: 210-215 ။ [PubMed]
Chamberlain SR, Robbins TW, Sahakian BJ ။ အာရုံစူးစိုက်မှု - လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ၏ neurobiology ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ ၂၀၀၇e;61: 1317-1319 ။ [PubMed]
Chamberlain SR, Sahakian BJ ။ Impulse ၏ neuropsychiatry ။ Curr Opin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;20: 255-261 ။ [PubMed]
Chambers MS, Atack JR, Carling RW, Collinson N, Cook SM, Dawson GR ။ သိမှတ်မှုတိုးမြှင့်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ GABAA alpha5 receptors ၏ benzodiazepine site ကိုမှာတစ် ဦး နှုတ် bioavailable, function ရွေးချယ်ပြောင်းပြန် agonist ။ J ကို Med Chem ။ 2004;47: 5829-5832 ။ [PubMed]
Chou-Green JM၊ Holscher TD, Dallman MF, Akana SF ။ 5-HT2C အဲဒီ receptor နောက်ကောက် mouse ကိုအတွက် compulsive အပြုအမူ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2003;78: 641-649 ။ [PubMed]
Clark L, Robbins TW, Ersche KD, Sahakian BJ လက်ရှိနှင့်ယခင်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုသူများအတွက်ရောင်ပြန်ဟပ် impulsivity ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;60: 515-522 ။ [PubMed]
Clark L, Roiser JP၊ Cools R၊ Rubinsztein DC၊ Sahakian BJ, Robbins TW ။ Stop signal ကိုတုံ့ပြန်မှုတားစီး tryptophan လျော့ကျသို့မဟုတ်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် serotonin Transporter polymorphic အားဖြင့် modulated သည်မဟုတ်: Impulse ၏ 5-HT သီအိုရီအဘို့အဂယက်ရိုက်။ Psychopharmacology (Berl) 2005;182: 570-578 ။ [PubMed]
Clarke HF၊ Dalley JW၊ Crofts HS, Robbins TW, Roberts AC ။ prefrontal serotonin ကုန်ခမ်းပြီးနောက်သိမြင်မှုမရှိခြင်း။ သိပ္ပံ။ 2004;304: 878-880 ။ [PubMed]
Clarke HF၊ Walker SC၊ Crofts HS၊ Dalley JW, Robbins TW, Roberts AC ။ prefrontal serotonin လျော့ကျမှုပြောင်းပြန်သင်ယူမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုပေမယ့်အာရုံစူးစိုက်မှုအစုကိုပြောင်းလဲမဟုတ်။ J ကို neuroscience ။ 2005;25: 532-538 ။ [PubMed]
Clarke HF၊ Walker SC၊ Dalley JW၊ Robbins TW, Roberts AC ။ prefrontal serotonin ကုန်ခမ်းပြီးနောက်သိမြင်မှုမရှိခြင်းအမူအကျင့်နှင့်အာရုံကြောဓာတုတိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Cereb Cortex ။ 2007;17: 18-27 ။ [PubMed]
ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် L-DOPA ကုသမှုကိုသိသော function-implications ၏ R. Dopaminergic modulation neuroscience Biobehav ဗျာ 2006;30: 1-23 ။ [PubMed]
ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် Cools R၊ Altamirano L, D'Esposito M. ပြောင်းပြန်လေ့လာခြင်းသည်ဆေးဝါးအခြေအနေနှင့်ရလဒ်ထွက်ပေါ်လာမှုအပေါ်မူတည်သည်။ Neuropsychologia ။ 2006;44: 1663-1673 ။ [PubMed]
et al Cottrell S, Tilden: D, ရော်ဘင်ဆင် P ကို, Bae J ကို, Arellano J ကို, Edgell အီး။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိအာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါရှိသည့်ကလေးငယ်များအားကုသမှုတွင် atomoxetine ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောကုထုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ တွက်ချက်ထားသောစီးပွားရေးဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှု။ ကျန်းမာရေးတန်ဖိုး။ 2008;11: 376-388 ။ [PubMed]
ခရော S က, Channon က S, Robertson က MM ။ Tourette ၏ရောဂါ - အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတားစီးမှု၊ မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းစသည်တို့အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်။ J ကိုကလေး Psychol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;46: 1327-1336 ။ [PubMed]
Crosbie J, Schachar R. မိသားစု ADHD အတွက်အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;158: 1884-1890 ။ [PubMed]
Denys: D, Zohar J, Westenberg HG ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္:ကို: preclinical နှင့်လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထား။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004;65 (ပျော့ပျောင်း 14: 11-17 ။ [PubMed]
Dias R ကို, Robbins TW, Roberts သည် AC ။ အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ prefrontal cortex အတွက် Dissociation ။ သဘာဝ။ 1996;380: 69-72 ။ [PubMed]
Evers EA, Cools R၊ Clark L, van der Veen FM၊ Jolles J, Sahakian BJ, et al ။ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြောင်းပြန်သင်ယူမှုအတွက်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်စဉ်အတွင်း prefrontal cortex ၏ Serotonergic မော်ဂျူ။ Neuropsychopharmacology ။ 2005;30: 1138-1147 ။ [PubMed]
Fineberg NA, Gale TM ။ obsessivecompulsive ရောဂါသက်သေအထောက်အထား -based pharmacotherapy ။ int J ကို Neuropsychopharmacol ။ 2005;8: 107-129 ။ [PubMed]
Fineberg NA, Saxena S, Zohar J, Craig KJ ။ 2007a ။ obsessive-compulsive ရောဂါ: နယ်နိမိတ်ပြissuesနာများ CNS Spectr 12359-364.364367-375 ။ [PubMed]
Fineberg NA, Sharma P, Sivakumaran T, Sahakian B, Chamberlain SR ။ obsessive-compulsive ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါဟာ obsessive-compulsive spectrum ကိုအတွင်းပိုင်ပါသလား CNS Spectr ။ 2007b;12: 467-482 ။ [PubMed]
Fineberg NA, Sivakumaran T, Roberts A, Gale T. ။ SRI တွင် quetiapine ထည့်သွင်းကုသမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောစွဲလမ်းမှု - compulsive disorder - randomized ထိန်းချုပ်ထားသောကုသမှုလေ့လာမှု။ int Clin Psychopharmacol ။ 2005;20: 223-226 ။ [PubMed]
Fong သည် T-, Kalechstein တစ်ဦးက, Bernhard B, Rosenthal R ကို, Rugle အယ်လ်ကိုဗီဒီယိုဖဲချပ်ဝေရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ၏ကုသမှုများအတွက် olanzapine ၏တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008;89: 298-303 ။ [PubMed]
ဖရန့် MJ၊ Moustafa AA၊ Haughey HM၊ Curran T၊ Hutchison KE ။ မျိုးရိုးဗီဇသုံးဆခွဲကွဲခြင်းက dopamine ကိုအားဖြည့်သင်ကြားရာတွင်အခန်းကဏ္ multiple များစွာကိုဖော်ပြသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2007;104: 16311-16316 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Garraux G, Goldfine A, Bohlhalter S, Lerner A, Hanakawa T, Hallett M. Tourette ၏ရောဂါတွင် midbrain မီးခိုးရောင်ကိစ္စတိုးလာသည်။ အမ်း Neurol ။ 2006;59: 381-385 ။ [PubMed]
Gottesman II ကို, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင် TD ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုအတွက် endophenotype အယူအဆ: အင်္ဂလိပ်နှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ရည်ရွယ်ချက်များ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;160: 636-645 ။ [PubMed]
Grant JE, Odlaug BL, Potenza MN ။ ဆံပင်ဆွဲစွဲစွဲ? trichotillomania ၏အခြားပုံစံတစ်ခုသည်ကုသမှု၏ရလဒ်ကိုမည်သို့တိုးတက်စေနိုင်မည်နည်း။ Harv ဗြာစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;15: 80-85 ။ [PubMed]
Grant JE, Potenza MN ။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်များ၏ compulsive ရှုထောင့်။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်မိပါတယ်။ 2006;29: 539-551 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hamidovic A, Kang UJ, de Wit H. အကျိုးသက်ရောက်မှုများကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် impulsivity နှင့်သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ် pramipexole ၏အနိမ့်မှအလယ်အလတ်စူးရှသောဆေးများ။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2008;28: 45-51 ။ [PubMed]
Hampshire တစ် ဦး က, Owen လေး။ အဖြစ်အပျက်နှင့်ဆက်စပ်သော fMRI ကို အသုံးပြု၍ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း။ Cereb Cortex ။ 2006;16: 1679-1689 ။ [PubMed]
Harrison AA, Everitt BJ, Robbins TW ။ dopaminergic ယန္တရားများနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု - Central 5-HT depletion သည်အာရုံစူးစိုက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၏တိကျမှုကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲထကြွလွယ်သောတုံ့ပြန်မှုကိုတိုးစေသည်။ Psychopharmacology (Berl) 1997;133: 329-342 ။ [PubMed]
et al Hatcher PD, ဘရောင်း VJ, Tait DS, Bate က S, Overend P ကို, Hagan JJ ။ 5-HT6 receptor ရန်များသည်ကြွက်များတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2005;181: 253-259 ။ [PubMed]
Hollander အီး၊ ဘာလင်ဟတ်၊ ဘာ့ဇ်ဂျန်၊ 2007a ။ အဆိုပါထကြွလွယ်သော - compulsive ရောင်စဉ်: neurocognitive, အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်နှင့်ကုသမှုတွေ့ရှိချက် phenotype အကြောင်းကြား ACNP တင်ဆက်မှုသိပ္ပံနည်းကျ abstraction ACNP 2007 နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး, p50 ။
Hollander အီး, Cohen ကို LJ ။ Impulse နှင့် Compulsivity ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာသတင်းစာ၊ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ၊ ၁၉၉၆ ။
et al Hollander အီး, DeCaria C, Gully R, Nitescu A, Suckow RF, Gorman JM ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် meta-chlorophenylpiperazine မှအပြုအမူနှင့် neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုအပေါ်နာတာရှည် fluoxetine ကုသမှု၏ဆိုးကျိုးများ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 1991a;36: 1-17 ။ [PubMed]
Hollander အီး, DeCaria C, Nitescu A, Cooper T, Stover B, Gully R, et al ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် Noradrenergic function ကို: clonidine မှအပြုအမူနှင့် neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 1991b;37: 161-177 ။ [PubMed]
Hollander E၊ Kim S, Khanna S, Pallanti S. Obsessive-compulsive disorder နှင့် obsessive-compulsive spectrum disorders: ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်ရှုထောင့်ဆိုင်ရာပြissuesနာများ။ CNS Spectr ။ 2007b;12 (၂ ပျံ ၃း၅-၁၃ ။ [PubMed]
Hollander အီး, Wong က CM ။ 1995 ။ obsessive-compulsive ရောင်စဉ်ရောဂါ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 56(သွင်းအားစု ၄၃-၆.၆ ။ ဆွေးနွေးချက် ၅၃–၅ ။ [PubMed]
Homberg JR, Pattij T, Janssen MC, Ronken E, De Boer SF, Schoffelmeer AN, et al ။ ကြွက်များတွင် serotonin Transporter ချို့တဲ့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်ပေမယ့်အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မဟုတ်ပါဘူး။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007;26: 2066-2073 ။ [PubMed]
Hornak J, O'Doherty J, Bramham J, Rolls ET, Morris RG, Bullock PR, et al ။ လူသားများအတွက် orbito-frontal သို့မဟုတ် dorsolateral prefrontal cortex တွင်ခွဲစိတ်ကုသမှုများအပြီးဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြောင်းပြန်လေ့လာခြင်း J ကို Cogn neuroscience ။ 2004;16: 463-478 ။ [PubMed]
Insel TR, Pickar N Naloxone အုပ်ချုပ်မှုသည်စွဲလမ်းမှု - မငြိမ်မသက်ဖြစ်သည့်ရောဂါ - အမှုပေါင်း (၂) ခု၏အစီရင်ခံစာ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1983;140: 1219-1220 ။ [PubMed]
Izquierdo A, Newman TK, Higley JD, Murray EA ။ သိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့် rhesus မျောက်များအတွက် socioemotional အပြုအမူ၏မျိုးဗီဇမော်ဂျူ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2007;104: 14128-14133 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဂျိုအဲလ်လက်ရှိစိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာရောဂါ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ - ဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;30: 374-388 ။ [PubMed]
Kolevzon A၊ Mathewson KA, Hollander E. Selototinin သည်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းသည်။ ထိရောက်မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုသုံးသပ်ချက်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;67: 407-414 ။ [PubMed]
et al Krishnan-Sarin S, Reynolds က B ကို, Duhig လေး, Smith ကတစ် ဦး, Liss T က, McFetridge တစ် ဦး ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုကဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းအစီအစဉ်တွင်ကုသမှုရလဒ်ကိုခန့်မှန်းသည် မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2007;88: 79-82 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lapiz-Bluhm MD, Soto-Pina AE, Hensler JG, Morilak DA ။ နာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအအေးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် serotonin လျော့ကျခြင်း, ကြွက်များတွင်တစ် ဦး အာရုံစူးစိုက်မှုကို set- ပြောင်းကုန်ပြီစမ်းသပ်မှုအတွက်ပြောင်းပြန်သင်ယူမှု၏လိုငွေပြမှုသွေးဆောင်။ Psychopharmacology (Berl) 2009;202: 329-341 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Li CS၊ Chang HL၊ Hsu YP၊ Wang HS၊ Ko NC ။ Tourette ရဲ့ရောဂါနှင့်အတူကလေးများမော်တာတုံ့ပြန်မှုတားစီး။ J ကို Neuropsychiatry Clin neuroscience ။ 2006;18: 417-419 ။ [PubMed]
Lijffijt M၊ Kenemans JL, Verbaten MN, van Engeland အိပ်ချ်။ အာရုံစူးစိုက်မှု - လိုငွေပြမှု / hyperactivity disorder အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရပ်တန့်ခြင်း၏ meta-analytic ပြန်လည်သုံးသပ်မှု - လစ်လပ်သောတားစီးမော်တာထိန်းချုပ်မှု။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol ။ 2005;114: 216-222 ။ [PubMed]
Lynd-Balta အီး, Haber SN ။ အဆိုပါမျောက်အတွက် ventral striatum မှ midbrain စီမံကိန်းများ၏ဖွဲ့စည်းမှု။ neuroscience ။ 1994;59: 609-623 ။ [PubMed]
Masaki D, Yokoyama C, Kinoshita S, Tsuchida H, Nakatomi Y, Yoshimoto K, et al ။ ကြွက်များတွင်သွား / no-go အလုပ်အတွက် limbic နှင့် cortical 5-HT neurotransmission နှင့်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ပြောင်းပြန်သင်ယူမှုအကြားဆက်ဆံရေး။ Psychopharmacology (Berl) 2006;189: 249-258 ။ [PubMed]
McElroy SL, နယ်လ်ဆင် EB, Welge JA, Kaehler L ကို, Keck PE, Jr Olanzapine ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှု: တစ်အနုတ်လက္ခဏာကျပန်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008;69: 433-440 ။ [PubMed]
McIntosh AR, Lobaugh NJ neuroimaging အချက်အလက်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနည်းဆုံးရင်ပြင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - လျှောက်လွှာများနှင့်တိုးတက်မှုများ။ Neuroimage ။ 2004;23 (ပျော့ပျောင်း 1: S250-S263 ။ [PubMed]
Menzies L, Achard S, Chamberlain SR, Fineberg N, Chen CH, del Campo N, et al ။ obsessive-compulsive ရောဂါ Neurocognitive endophenotypes ။ ဦးနှောက်။ 2007a;130 (Pt 12: 3223-3236 ။ [PubMed]
Menzies L, Chamberlain SR, Laird AR, Thelen SM, Sahakian BJ, Bullmore ET ။ neuroimaging နှင့်စွဲလမ်း - compulsive ရောဂါ၏ neuropsychological လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သက်သေအထောက်အထားပေါင်းစပ်: အဆိုပါ orbitofronto-striatal မော်ဒယ်ပြန်လည်လည်ပတ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2008a;32: 525-549 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Menzies L ကို, ဝီလျံ GB ကို, Chamberlain SR, Ooi ကို C, Fineberg N ကို, Suckling J ကို။ obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်၎င်းတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများအဖြူကိစ္စမူမမှန်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008b;165: 1308-1315 ။ [PubMed]
Naqvi နယူးဟမ်းရှား, Rudrauf: D, Damasio H ကို, အ insula မှ Bechara အေပျက်စီးခြင်းစီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်ရန်စွဲ disrupts ။ သိပ္ပံ။ 2007;315: 531-534 ။ [PubMed]
Park SB, Coull JT, McShane RH, Young AH, Sahakian BJ, Robbins TW, et al ။ Tryptophan သည်ပုံမှန်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်တွင်ရွေးချယ်မှုနည်းပါးသည်။ Neuropharmacology ။ 1994;33: 575-588 ။ [PubMed]
Passetti က F, Dalley JW, Robbins TW ။ တစ် ဦး ကြွက်ငါး - ရှေးခယျြမှုတုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်ကိုအသုံးပြု။ အာရုံစူးစိုက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် serotonergic နှင့် dopaminergic ယန္တရားများ၏နှစ်ဆ dissociation Psychopharmacology (Berl) 2003;165: 136-145 ။ [PubMed]
Pizzagalli DA, Evins AE, Schetter EC, Frank MJ, Pajtas PE, Santesso DL, et al ။ dopamine agonist ၏တစ်ကြိမ်ထိုးခြင်းသည်လူသားများတွင်အားဖြည့်သင်ကြားမှုကိုအားနည်းစေသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2008;196: 221-232 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး - compulsive ရောဂါအတွက် Impulse နှင့် compulsivity ။ ဗြာဇီယာ Psiquiatr ။ 2007a;29: 105-106 ။ [PubMed]
Potenza MN ။ လုပ်ရန်သို့မဟုတ်မလုပ်ဖို့? စွဲလမ်းမှု၊ တွန်းအား၊ ချုပ်တည်းမှုနှင့်ထကြွလွယ်သောရှုပ်ထွေးမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007b;164: 4-6 ။ [PubMed]
Potenza MN, Leung HC၊ Blumberg HP၊ Peterson BS, Fulbright RK, Lacadie CM, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် ventromedial prefrontal cortical function ကိုတစ်ခု FMRI Stroop တာဝန်လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003a;160: 1990-1994 ။ [PubMed]
Potenza MN, Steinberg MA, Skudlarski P, Fulbright RK, Lacadie CM, Wilber MK, et al ။ လောင်းကစားလောင်းကစားခြင်းရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်တိုက်တွန်း: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003b;60: 828-836 ။ [PubMed]
Povurovsky M, Faragian S, Shabeta A, Kosov A. လက်တွေ့နှင့်ဆိုင်သောဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ပူးတွဲရောဂါရှိခြင်းနှင့်ဆေးဝါးကုထုံးနှင့်စွဲမြဲ။ စွဲမက်စေသည့်ရောဂါမပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2008;159: 133-139 ။ [PubMed]
Reuter J ကို, Raedler T က, နှင်းဆီ M က, လက်, ငါ Glascher J ကို, Buchel C. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏လျှော့ချ activation ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နတ် neuroscience ။ 2005;8: 147-148 ။ [PubMed]
Robbins TW ။ အပြုအမူဆေးဝါးဗေဒနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အာရုံကြောဓာတုဗေဒ: 5- ရှေးခယျြမှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်။ Psychopharmacology (Berl) 2002;163: 362-380 ။ [PubMed]
Robbins TW ။ ရွှေ့ပြောင်းနှင့်ရပ်တန့်: နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal အလွှာ, neurochemical မော်ဂျူနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2007;362: 917-932 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rogers RD, Blackshaw AJ, Middleton HC၊ Matthews K, Hawtin K, Crowley C, et al ။ Tryptophan ကုန်ခမ်းမှုသည် methylphenidate သည်ငယ်ရွယ်သောလူကြီးများအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုအားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောအခါလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်သင်ယူခြင်းကိုနှောင့်ယှက်သည်။ Psychopharmacology (Berl) 1999a;146: 482-491 ။ [PubMed]
et al Rogers RD, Everitt BJ, Baldacchino A, Blackshaw AJ, Swainson R, Wynne K ။ နာတာရှည် amphetamine အလွဲသုံးစားမှု, opiate အလွဲသုံးစားမှု, prefrontal cortex ဖို့ focal ပျက်စီးမှုနှင့်အတူလူနာနှင့် tryptophan- ကုန်ခမ်းပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချအသိအမှတ်ပြုအတွက် disissociic လိုငွေပြမှု: monoaminergic ယန္တရားများများအတွက်သက်သေအထောက်အထား။ Neuropsychopharmacology ။ 1999b;20: 322-339 ။ [PubMed]
mesia prefrontal cortex အမှားရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်နေစဉ် Rubia K ကို, Smith က AB, Brammer MJ, တေလာအီးညာယုတ်ညံ့ prefrontal cortex တုံ့ပြန်မှုတားစီးဖျန်ဖြေ။ Neuroimage ။ 2003;20: 351-358 ။ [PubMed]
Schilman EA ၏, Uylings HB, Galis-de Graaf Y ကို, ယောလ: D, Groenewegen HJ ။ ကြွက်များတွင်အဆိုပါ Orbital cortex မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဟာ caudate-putamen ရှုပ်ထွေးသော၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းမှမှန်းချက်ရဲ့။ neuroscience လက်တ။ 2008;432: 40-45 ။ [PubMed]
Seymour B, Daw N, Dayan P, Singer T, Dolan R. လူ့ striatum တွင်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အကျိုးအမြတ်ကွဲပြားမှုကုဒ်ကို။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 4826-4831 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Stein DJ၊ Chamberlain SR, Fineberg N. ABC ပုံစံအလေ့အထမမှန်ခြင်း - ဆံပင်ဆွဲခြင်း၊ အရေပြားကောက်ခြင်းနှင့်အခြားကျပုံစံများ။ CNS Spectr ။ 2006;11: 824-827 ။ [PubMed]
Stein DJ သမား Hollander E. Obsessive-compulsive spectrum disorders ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1995;56: 265-266 ။ [PubMed]
Szeszko PR, Ardekani BA, Ashtari M, Malhotra AK, Robinson DG, Bilder RM, et al ။ obsessive- compulsive ရောဂါအတွက် White ကကိစ္စမူမမှန်: တစ်ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;62: 782-790 ။ [PubMed]
Talbot PS, Watson DR, Barrett SL, Cooper SJ လျင်မြန်သော tryptophan လျော့နည်းမှုသည်ကျန်းမာသောလူသားများတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုသိမြင်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးပြောင်းပြန်လေ့လာခြင်းကိုမထိခိုက်စေဘဲပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2006;31: 1519-1525 ။ [PubMed]
Tsaltas E, Kontis: D, Chrysikakou S, Giannou H, Biba A, Pallidi S, et al ။ obsessive- compulsive ရောဂါ (OCD) ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်အဖြစ်အားဖြည့် Spatial Alternative: OCD pathophysiology အတွက် 5-HT2C နှင့် 5-HT1D အဲဒီ receptor ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;57: 1176-1185 ။ [PubMed]
ဗန် der Plasse, G, Feenstra MG ။ Serial ပြောင်းပြန်သင်ယူမှုနှင့်စူးရှ tryptophan ကုန်ခမ်း။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2008;186: 23-31 ။ [PubMed]
Vertes RP ။ ကြွက်များတွင် infralimbic နှင့် prelimbic cortex ၏ differential ကိုစီမံကိန်း။ synapses ။ 2004;51: 32-58 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ ။ လူသားတွေအတွက်ကင်းအားဖြည့်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ် imaging လေ့လာမှုများ။ J ကို Psychopharmacol ။ 1999;13: 337-345 ။ [PubMed]
Walker က SC, Robbins TW, Roberts သည် AC အဆိုပါ marmoset အတွက် orbitofrontal cortex function ကိုမှ dopamine နှင့် serotonin ၏ differential ကိုပံ့ပိုးမှုများကို။ Cereb Cortex ။ 2009;19: 889-898 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Watkins LH, Sahakian BJ, Robertson MM, Veale DM, Rogers RD, Pickard KM, et al ။ Tourette ၏ရောဂါနှင့် obsessive-compulsive ရောဂါအတွက်အလုပ်အမှုဆောင် function ကို။ Psychol Med ။ 2005;35: 571-582 ။ [PubMed]
Westenberg HG, Fineberg NA, obsessive-compulsive disorder: serotonin နှင့် ကျော်လွန်၍ Denys D. Neurobiology ။ CNS Spectr ။ 2007;12 (၂ ပျံ ၃း၅-၁၃ ။ [PubMed]
Winstanley, CA, Chudasama Y, Dalley JW, Theobald DE, Glennon JC, Robbins TW ။ Intra-prefrontal 8-OH-DPAT နှင့် M100907 တို့သည်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးကြွက်များတွင်ငါးခုရွေးချယ်သည့်အမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်အပေါ်စိတ်မကျေနပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2003;167: 304-314 ။ [PubMed]
Winstanley, CA, လင်းယုန် DM, Robbins TW ။ ADHD စပ်လျဉ်း Impulse ၏အမူအကျင့်မော်ဒယ်များ: လက်တွေ့နှင့် preclinical လေ့လာမှုများအကြားဘာသာပြန်ချက်။ Clin Psychol ဗျာ 2006;26: 379-395 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Winstanley, CA, Theobald DE, Dalley JW, Glennon JC, Robbins TW ။ 5-HT2A နှင့် 5-HT2C receptor ရန်လိုသူများသည် impulsivity ၏အတိုင်းအတာအပေါ်ဆန့်ကျင်သောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 5-HT ကုန်ခမ်းနှင့်အတူအပြန်အလှန်။ Psychopharmacology (Berl) 2004;176: 376-385 ။ [PubMed]
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါများအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ ၁၀ ကြိမ်မြောက်ထုတ်ဝေခြင်း (ICD-10) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ဂျီနီဗာ၊ ၁၉၉၂ ။
Yucel M, Harrison BJ, Wood SJ, Fornito A, Wellard RM, Pujol J, et al ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် medial တိုကျရိုကျ cortex ၏ functional နှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးပွောငျးလဲ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;64: 946-955 ။ [PubMed]
Zack M က, Poulos CX ။ တစ်ဦးက D2 ရန်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲ၏အကြိုးနှင့် priming သက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32: 1678-1686 ။ [PubMed]
Zohar J, Insel TR, Zohar-Kadouch RC, Hill JL, Murphy DL ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် Serotonergic တုံ့ပြန်မှု။ နာတာရှည် clomipramine ကုသမှု၏ဆိုးကျိုးများ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1988;45: 167-172 ။ [PubMed]